Anthony Martial oo maalintii ugu dambeysay suuqa iska diiday inuu ka tago Man United.. (Sababta uu u joogay & Kooxda uu ku sii jeeday) – Gool FM
Anthony Martial oo maalintii ugu dambeysay suuqa iska diiday inuu ka tago Man United.. (Sababta uu u joogay & Kooxda uu ku sii jeeday)
(Manchester) 01 Sebt 2021. Weeraryahanka Kooxda kubadda cagta Manchester United ee Anthony Martial ayaa iska diiday inuu ka tago Old Trafford maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Sida wararku ay sheegayaan Anthony Martial ayaa hoos u dhigay fursad uu dib ugu laaban karay Kooxda Lyon maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga oo xalay la soo gabagabeeyey.
Anthony Martial waa uu iska diiday inuu heshiis amaah ah dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Lyon, si uu ugu dagaallamo booskiisa Manchester United, inkastoo uu dib ugu soo laabtay kooxda reer England ciyaaryahan Cristiano Ronaldo.
Inkastoo xiddiga reer Portugal uu dib ugu soo laabtay Manchester United haddana xiddiga xulka qaranka Faransiiska ee Martial waxa uu go’aansaday inuu sii joogo kooxda oo uu dagaallamo booskiisa safka hore.
Bishii Janaayo ee sanadkii 2019-kii ayuu Martial saxiixay heshiis cusub oo garoonka Old Trafford ku sii hayn doona illaa sanadka 2024-ka.
Xiddigaha u yimid iyo kuwa ka tagay kooxda Manchester United, xilli xalay suuqa kala iibsiga irdaha loo laabay